DTCoin • DTCircle • Xog Weyn Cryptocurrency oo ka socota DT Bulsho Ushare
Robot ganacsi oo loogu talagalay suuqa saliidda.
Ku maalgeli Xogta Weyn Cryptocurrency
Soo ogow DTCoin crypto loogu talagalay Xogta Weyn
DTCOIN waa cryptocurrency oo qiimaheedu uu ku saleysan yahay shabakadiisa macaamil ganacsi iyo ka ganacsiga xogta la soo saaray lana ururiyey codsiyada ku jira nidaamka deegaanka ee 'DTCircle ecosystem', kaas oo loo sameeyay inuu ka faa'iideysto xogtiisa.
DTCOIN waxay dooratay inay ku tiirsanaato inta badan suuqa xogta weyn kaliya maahan mugga ganacsiga iyo baahidiisa joogtada ah, laakiin sidoo kale maxaa yeelay waxay dooneysaa inay qiimo u keento waaxda weyn ee xogta iyadoo la qorsheynayo xal dhameystiran. DTCOIN wuxuu u abuurayaa fikrad cusub dhaqaalaha wadaagga xogta, halkaasoo adeegsaduhu noqonayo markii ugu horreysay ciyaaryahan firfircoon ee suuqa xogta.
Iibso DTCoin Tababarka diiwaangelinta
Qiimaha Token ee Janaayo 2019
Qiimaha Token ee Noofambar 2020
Qiimaha Token ee Janaayo 2021
Qiimaha Token ee Maajo 2021
Soo ogow DT Coin, oo dhowaan lagu qori doono Nasdaq
47-jir ganacsade Talyaani ah, halkaas oo uu 23 sano ku qaatay iskiis u shaqeynta xisaabiye iyo lataliye ganacsi degmada Prati. Sannadkii 2010, wuxuu qabtay doorka agaasimaha shirkadda, wuxuuna ka mid ahaa kuwii ugu horreeyay ee Talyaanigu iibsado Bitcoins, isagoo xaqiiqsaday awoodda teknolojiyadda xannibaadda ee soo ifbaxaysa Sannadkii 2016, wuxuu naftiisa u huray falanqaynta lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' iyo dhaqaalahooda, isagoo ka bilaabay dariiqii aakhirkii horseeday abuurista DTCOIN.
Soo bandhigid Mur Anthony Murgo
Tallaabada 1 / Diiwaangelinta
Raac tallaabooyinka kala duwan:
Islaaydh 1 - Isdiiwaangalin ahaan Wadaag
Islaaydh 2 - Xogta shakhsiga ah
Islaaydh 3 - Warqad ballanqaad ah (kaliya loogu talagalay dadka degan Talyaaniga)
Islaaydh 4 - Aqbalida mabaadi'da guud
Islaaydh 5 - Qarsoodi
Islaaydh 6 - Email iyo Gelitaanka Aqoonsiga
Questions Su'aalo ma jiraan? na raac telegraam.
Tallaabada 2 / Ushare
Ku xidhnow Ushare-kaaga (backoffice) oo aad tag tag 'BUY tab', qaybta DUKAANKA.
Nooca Ingiriisiga: https://www.ushare.marketing/en/
Nooca Faransiiska: https://www.ushare.marketing/fr/
Nooca Talyaaniga: https://www.ushare.marketing/
Sideed u dooneysaa inaad ku iibsato lacagtaada DT?
Meelaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' Adigoo ku wareejinaya bangiga
Tallaabada 3 / Ushare
Soo iibso Kaarka.
Xulo Ucard-ka lacagta la doonayo oo guji badhanka iibsiga.
Tallaabada 4 / Ushare
Hubi kanaga gadashada.
Hubi tirada iyo qiimaha ka dib riix "Amarka Buuxi".
Bogga xiga, xulo codka loo baahan yahay ee 'cryptocurrency', ka dibna ansax sanduuqyada hubinta ee 2. Kadib dhagsii badhanka midigta hoose.
Tallaabada 5 / Ushare
Dhamee kanaga gadashada iyadoo lacag lagu wareejinayo.
Tag jeebkaaga si aad ugu dirto qaddarka saxda ah ee 'crypto' (Bitcoin ama USDC) ee aad dooratay cinwaanka kaaga muuqda shaashaddaada. Tixgeli inaad ku darto khidmadaha macaamil ganacsi ee 'crypto'. Waa inaad dirtaa qadarka saxda ah ee lagaa codsaday.
Tallaabada 6 / Ushare
Ku xaqiiji iibsigaaga inaad la xiriirto DTCircle Support
Ugu dambeyntii, samee a fariin ku socota taageerada DTCircle inaad u sheegto lambarka xashiishka macaamilka ee aad ka sameysay arjigaaga 'crypto'.
Guji "Nala Xiriir" oo buuxi meelaha hoose:
Xulo Website : Suuqgeynta Macaashka Bulshada
magaca : Magaca dambe iyo magaca koowaad
Email : Cinwaanka emailka
Subject : Lacag bixinta Crypto
Message : Muuji tirada haashka ee macaamilka aad hadda ka sameysay arjigaaga 'crypto'.
Tallaabada 7 / DTcircle
Iibso calaamadaha DTCircle 1/7
Hadda waxaan raaci doonnaa tillaabooyinka si loo iibsado DT Circle. Dashboard kaaga Ushare, dhagsii Ewallet, ka dibna soo koobista E-boorsada.
Ubalance-kaaga waxaad ku iibsaneysaa: 3391,70 / 8,50: 399,02
Waxaan ku tusi doonaa in lambarrada 399 aan lahayn jajab tobanlaha.
Tallaabada 8 / DTcircle
Iibso calaamadaha DTCircle 2/7
Guji tabka Dukaanka, ka dibna Iibso
Si aad u iibsato 399 calaamado waa inaad doorataa 3 xirmo oo ah 100 iyo 9 xirmo oo 10 ah.
Tallaabada 9 / DTcircle
Iibso calaamadaha DTCircle 3/7
Xulo tirada ka dib riix "Soo Iibso Wax Soo Saar Kale" si aad ugu darto badeecooyin kale.
Iibso calaamadaha DTCircle 4/7
Ku celi nidaamkii hore xirmooyinka kala duwan.
Tallaabada 10 / DTcircle
Iibso calaamadaha DTCircle 5/7
Hubi wadarta oo tag "Amarka Dhameystiran".
Tallaabada 11 / DTcircle
Iibso calaamadaha DTCircle 6/7
Dooro "Ubalance" habka lacag bixinta, hubi shuruudaha oo sii wad.
Tallaabada 12 / DTcircle
Iibso calaamadaha DTCircle 7/7
Daqiiqado kadib, astaamaha cusub ayaa lagu dari doonaa kuwii hore.
Ma sahlana in la bilaabo biimaynta noocan ah markii aanad lahayn khibrad ganacsi iyo khibrad hore. Taasi waa sababta, waxaan u ogolaaday naftayda inaan ku raaco, si aan kaaga caawiyo inaad sameysatid xisaabaadkaaga broker (dillaal) iyo kanaga robot ganacsi, ka jawaab dhammaan su'aalahaaga oo u shaqee sidii taageero farsamo.
Broker aan sharciyeysnayn
La heli karo Ogosto 2021
Imtixaan ka hooseeya
Ku soo iibso DT Coin € 8,50 ka hor IPO, oo ku yaal Nasdaq. Maanta, dadku waxay dooran karaan inay kaqeybqaataan ka ganacsigooda xogtooda ayna kasbadaan qayb ka mid ah lacagaha ka soo baxa iibinta xogtooda DTCoin
Horumarinta shabakadaada guryaha, hel komishano deeqsi ah si aad ugu qabato mashruucaaga ganacsi!
Maalgashi khatar ah
Ganacsigu wuxuu kuu muujinayaa halista khasaarooyinka u dhigma dhigaalka waxayna kaliya ku habboon tahay macaamiil caqli leh oo leh awood dhaqaale oo uu ku qaado khatartan. Boggan ama warbaahin kale sinnaba sinaba uma ahan dalab la-talin maalgashi ama dhiirigelin wax kasta oo lagu iibsado ama lagu iibiyo qalabka maaliyadeed, gaar ahaan qandaraasyada maaliyadeed ee ku taxan qodobka 314-31-1 ee RGAMF iyo qodobka L 533-12-7 ee Xeerka Lacagta iyo Maaliyadeed. Markaad booqato boggan oo aad adeegsatid adeegyadeeda, waxaad caddeynaysaa in wixii macluumaad ah ee ku saabsan mid ka mid ah qandaraasyada maaliyadeed ee ku taxan qodobka 314-31-1 ee RGAMF iyo qodobka L. 533-12-7 ee xeerka lacagta iyo maaliyaddu ay ka imaad dalabkaaga oo keliya dalabkaaga. Natiijooyinka hore ma aha dammaanad qaad natiijooyinka mustaqbalka. Soo-booqdehu wuxuu mas'uul ka yahay adeegsiga lagu sameeyay macluumaadka la helay oo wuxuu qaadanayaa dhammaan khataraha la xiriira adeegsiga. Gaar ahaan, waxay ku xiran tahay booqdaha inuu qaado dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah ilaalinta sharafka caasimadiisa. Robots-trading.fr.
Degel cusub oo u heellan Astaamaynta guryaha iyo waxyaabaha isboortiga